Aferana fitaovam-piadiana sy vono olona Miaramila iray tsy avelan’ny namany hofotorana
Taorian’ireo dimy lahy nitondra basy sy nahatrarana bala roa tsy nipoaka ka naiditra am-ponja, dia miaramila am-perinasa iray no voarohirohy hatao famotorana nefa tsy mbola nitranga, noho ny fanafihana nahafaty mpandraharahana lavanila tany Sambava.
Tsy nanaiky ny hanolorana ny miaramilany ny toby 711 ao Amborinala, Sambava. Voarohirohy tamin’ny fanafihana mitam-basy nahafaty ilay mpandraharaha amin’ny sehatry ny lavanila izay nitranga tao Tsararivotra, fokontany Ambodisatrana, ao Sambava, ny alin’ny alahady 28 aprily teo. Tsy sahy miditra ao amin’ny toby miaramila ny zandary mpanao famotorana na dia efa nahazo alalana avy tamin’ny fitsarana ambaratonga voalohany Antalaha aza. Voatery nandefasana fiantsoana ity miaramila iray am-perinasa ity. Araka ny voalazan’ny loharanom-baovao azo antoka iray, tsy nety nipoitra namaly ny fiantsoana azy izy. Efa samy nidoboka am-ponja ireo dimy lahy voahadihady tamin’ity raharaha ity izay nahatrarana basy sy ambina bala roa tsy mbola nipoaka ary telo efa nipoaka. Tao anatin’ny fanadihadiana lalin’ny mpanao famotorana no nahatonga ity miaramila ity voarohirohy.